लूका २३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
२३ तब तिनीहरू सबका सब उठे अनि हुल बाँधेर उहाँलाई पिलातसकहाँ लगे। २ त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई यस्तो आरोप लगाउन थाले: “यस मानिसले हाम्रो जातिलाई भड्काइरहेको, सम्राट्लाई* कर तिर्न रोकिरहेको अनि आफैलाई म ख्रीष्ट, राजा हुँ भनिरहेको हामीले फेला पाऱ्यौं।” ३ तब पिलातसले उहाँलाई प्रश्न गरे: “के तिमी यहूदीहरूको राजा हौ?” उहाँले जवाफ दिनुभयो: “तपाईं आफै भन्दै हुनुहुन्छ।” ४ त्यसपछि पिलातसले मुख्य पुजारीहरू अनि भीडलाई भने: “मैले यस मानिसमा केही अपराध फेला पारिनँ।” ५ तर तिनीहरूले यसो भन्दै जिद्दी गर्न लागे: “यसले आफ्नो शिक्षाद्वारा सारा यहूदियाका अनि गालीलदेखि यहाँसम्मका सबै मानिसहरूलाई उक्साइरहेको छ।” ६ यो सुनेर उहाँ गालीली हुन्‌ कि भनेर पिलातसले सोधे। ७ अनि उहाँ हेरोदको* अधिकारमा पर्ने क्षेत्रको हुनुहुँदोरहेछ भनेर पक्का गरेपछि तिनले उहाँलाई हेरोदकहाँ पठाए, जो त्यतिखेर यरूशलेममै थिए। ८ येशूलाई देखेपछि हेरोद असाध्यै खुसी भए, किनकि उहाँको विषयमा सुनेको हुनाले तिनले निकै समयदेखि उहाँलाई हेर्ने इच्छा गरिरहेका थिए। साथै, उहाँले केही चमत्कार गर्नुभएको हेर्ने आशा पनि तिनले गरिरहेका थिए। ९ तिनले थुप्रै प्रश्न सोधे तर उहाँले केही जवाफ दिनुभएन। १० तर मुख्य पुजारीहरू अनि शास्त्रीहरू घरीघरी तात्तिएर उठ्दै उहाँलाई आरोप लगाइरहे। ११ तब हेरोदले आफ्ना अङ्गरक्षकहरूसित मिलेर उहाँको बेइज्जत गरे अनि उज्यालो रङ्गको लुगा लगाइदिएर उहाँलाई हाँसोमा उडाए। त्यसपछि तिनले उहाँलाई पिलातसकहाँ फिर्ता पठाइदिए। १२ त्यही दिन हेरोद र पिलातसबीच मित्रता गाँसियो, किनकि त्यसअघि तिनीहरूबीच शत्रुता चलिरहेको थियो। १३ त्यसपछि पिलातसले मुख्य पुजारीहरू, यहूदी न्यायपरिषद्का सदस्यहरू अनि अरू मानिसहरूलाई एकसाथ बोलाए १४ र तिनीहरूलाई यसो भने: “यस मानिसले जनतालाई विद्रोह गर्न उक्सायो भनेर तिमीहरूले उसलाई मकहाँ ल्यायौ। हेर, मैले तिमीहरूकै सामने उसको छानबिन गरें तर तिमीहरूले लगाएको आरोप प्रमाणित हुने कुनै आधार मैले यस मानिसमा फेला पारिनँ, १५ न त हेरोदले नै फेला पारे। त्यसैले त तिनले उसलाई हामीकहाँ फिर्ता पठाए। हेर, मृत्युदण्ड पाउने योग्य केही काम उसले गरेको छैन। १६ त्यसैले म उसलाई सजाय दिएर छोडिदिन्छु।” १७ * — १८ तर तिनीहरू सबै जना एकसाथ यसो भन्दै चिच्याए: “यसलाई लैजानुहोस्, बरु हाम्रो निम्ति बरब्बालाई मुक्त गरिदिनुहोस्!” १९ (त्यस मानिसलाई सहरमा भएको विद्रोह र हत्याको आरोपमा झ्यालखानामा हालिएको थियो।) २० पिलातसले तिनीहरूलाई फेरि सम्झाए, किनकि तिनी येशूलाई मुक्त गर्न चाहन्थे। २१ तर तिनीहरू यसो भन्दै कराउन थाले: “टाँग्नुहोस्! त्यसलाई खम्बामा टाँग्नुहोस्!” २२ पिलातसले तिनीहरूलाई तेस्रो पटक यसो भन्दै सम्झाए: “किन? यस मानिसले के खराबी गऱ्यो र? उसले मृत्युदण्ड पाउन योग्य कुनै काम गरेको मैले फेला पारिनँ। त्यसैले म उसलाई सजाय दिएर छोडिदिन्छु।” २३ पिलातसको कुरा सुनेर तिनीहरू झन्‌ जोसिएर चर्को स्वरले कराउँदै उहाँलाई खम्बामा टाँग्ने माग गर्न थाले। तिनीहरू यतिबिघ्न कराए कि २४ पिलातसले हार मानेर तिनीहरूको माग पूरा गरिदिने आदेश दिए। २५ तिनले विद्रोह र हत्याको आरोपमा झ्यालखानामा परेको मानिसलाई तिनीहरूको मागअनुसार मुक्त गरिदिए तर येशूलाई भने तिनीहरूकै इच्छाबमोजिम मृत्युदण्ड दिनलाई सुम्पे। २६ तब उहाँलाई लैजाँदै गर्दा तिनीहरूले गाउँबाट आउँदै गरेको साइरेनीवासी सिमोनलाई पक्रे अनि तिनलाई यातनाको खम्बा* बोकाएर येशूको पछि-पछि हिंड्न लगाए। २७ अनि मानिसहरूको एउटा ठूलो दल उहाँको पछि-पछि लागिरहेको थियो, जसमा स्त्रीहरू पनि सामेल थिए। तिनीहरू आफ्नो छाती पिटीपिटी उहाँको निम्ति विलाप गरिरहेका थिए। २८ तब ती स्त्रीहरूतिर फर्केर येशूले भन्नुभयो: “हे यरूशलेमका छोरीहरू हो, मेरो निम्ति रुन छोड। बरु तिमीहरू आफू र आफ्ना छोराछोरीहरूका निम्ति रोओ। २९ किनकि हेर यस्तो बेला आउँदैछ, जब मानिसहरूले यसो भन्नेछन्‌: ‘सुखी हुन्‌ ती स्त्रीहरू, जो बाँझी छन्‌ र जसले सन्तान जन्माएनन्‌ अनि दूध चुसाएनन्‌!’ ३० त्यतिखेर मानिसहरूले पहाडहरूलाई ‘हामीमाथि खस!’ अनि डाँडाहरूलाई ‘हामीलाई छोप!’ भन्न थाल्नेछन्‌। ३१ रूख हरियो भएको बेला त यस्तो हालत छ भने सुकेपछि झन्‌ के होला?” ३२ त्यसबेला दुई जना अपराधीलाई पनि उहाँसँगै मृत्युदण्ड दिन लगिंदै थियो। ३३ अनि खप्पर भनिने ठाउँमा पुगेपछि तिनीहरूले उहाँलाई खम्बामा टाँगे। साथै, तिनीहरूले ती अपराधीहरूमध्ये एक जनालाई उहाँको दाहिनेपट्टि र अर्कोलाई देब्रेपट्टि टाँगे। ३४ [[तब येशू यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो: “हे बुबा, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। किनकि तिनीहरू जे गर्दैछन्‌, त्यो तिनीहरू जान्दैनन्‌।”]]* साथै, उहाँको लुगा आपसमा बाँड्न तिनीहरूले गोला हाले। ३५ मानिसहरूको भीड उभिएर हेरिरहेको थियो। तर यहूदी न्यायपरिषद्का सदस्यहरू भने यसो भन्दै उहाँको खिसी गरिरहेका थिए: “यसले अरूलाई त बचायो! यदि यो परमेश्वरले पठाउनुभएको ख्रीष्ट अनि उहाँले चुन्नुभएको जन हो भने आफूलाई पनि बचाओस्।” ३६ सिपाहीहरूले समेत उहाँलाई हाँसोमा उडाए। उहाँको नजिक गएर अमिलो दाखमद्य दिंदै ३७ तिनीहरूले यसो भने: “यदि तँ यहूदीहरूको राजा होस् भने आफैलाई बचा।” ३८ अनि उहाँको शिरमास्तिर यस्तो अभियोग लेखेर पनि राखिएको थियो: “यो यहूदीहरूको राजा हो।” ३९ तब उहाँसँगै टाँगिएका अपराधीहरूमध्ये एक जनाले खिसी गर्दै उहाँलाई यसो भन्न थाल्यो: “तिमी त ख्रीष्ट हौ नि, होइन र? लौ, आफूलाई बचाऊ अनि हामीलाई पनि बचाऊ।” ४० तर अर्कोचाहिंले उसलाई हप्काउँदै यसो भन्यो: “तैंले पनि यस मानिसले जस्तै सजाय पाइरहेको छस्, तैपनि के तँलाई परमेश्वरको अलिकता पनि डर लाग्दैन? ४१ हामीले यस्तो सजाय पाउनु न्यायोचित छ। किनकि हामीले जे गऱ्यौं, त्यसकै पूरा फल भोगिरहेका छौं। तर यस मानिसले त यस्तो सजाय पाउन लायकको केही गरेको छैन।” ४२ अनि उसले भन्यो: “हे येशू, तपाईं राजा बन्नुभएपछि* मलाई सम्झनुहोस्।” ४३ तब उहाँले उसलाई भन्नुभयो: “म आज तिमीलाई साँचो-साँचो भन्छु, तिमी मसित प्रमोदवनमा हुनेछौ।” ४४ त्यतिखेर मध्यान्हको लगभग बाह्र बजेको भए तापनि दिउँसो तीन बजेसम्म सारा पृथ्वीभरि अन्धकार छायो। ४५ किनकि घामले उज्यालो दिएन। तब मन्दिरको पर्दा* बीचबाट च्यातिएर दुई फ्याक भयो। ४६ अनि ठूलो स्वरले कराउँदै येशूले यसो भन्नुभयो: “हे बुबा, म आफ्नो सास* तपाईंको हातमा सुम्पिन्छु।” यति भनिसकेपछि उहाँ बित्नुभयो। ४७ आफ्नो अगाडि भएका यी सब घटनाहरू देखेर सैनिक अफिसरले यसो भन्दै परमेश्वरको महिमा गर्न थाले: “यी मानिस साँच्चै परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिस रहेछन्‌।” ४८ तब तमासा हेर्न जम्मा भएको भीडमा हुनेजति सबै जना यो सब देखेपछि आफ्नो छाती पिट्दै फर्कन थाले। ४९ उहाँसित चिनजान भएकाहरू सबै जना टाढै उभिरहेका थिए। अनि गालीलदेखि उहाँको पछि-पछि आएका स्त्रीहरू पनि उभिएर यो सब हेरिरहेका थिए। ५० अनि हेर, त्यहाँ न्यायपरिषद्का सदस्य, यूसुफ नाम गरेका एक जना मानिस पनि थिए। तिनी भलादमी अनि परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिस थिए— ५१ यी मानिसले तिनीहरूको षड्यन्त्र र कामको पक्षमा आफ्नो मत खसालेका थिएनन्‌—तिनी यहूदियावासीहरूको अरिमथिया भन्ने सहरका मानिस थिए। तिनले परमेश्वरको राज्यको बाटो हेरिरहेका थिए। ५२ तिनले पिलातसकहाँ गएर येशूको शव मागे। ५३ त्यसपछि, तिनले उहाँको शव तल झारेर मलमलको कपडाले बेह्रे अनि चट्टान खोपेर बनाएको चिहानमा राखे, जहाँ त्यसअघि कसैको शव राखिएको थिएन। ५४ त्यो दिन, तयारीको दिन थियो र साँझ परेर विश्राम-दिन सुरु हुनै लागेको थियो। ५५ तब गालीलदेखि उहाँसँगै आएका स्त्रीहरू पछि-पछि लागे अनि उहाँलाई राखिएको चिहानलाई नियाल्नुका साथै उहाँको शवलाई कसरी राखिएको छ, त्यो पनि तिनीहरूले हेरे। ५६ अनि सुगन्धित मसला र तेल तयार पार्न तिनीहरू फर्के। तर व्यवस्थामा दिइएको आज्ञाअनुसार तिनीहरूले विश्राम-दिनमा आराम भने पक्कै गरे।
^ लूका २३:२ * ग्रीकमा “सिजर।”
^ लूका २३:७ * लूका ३:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ लूका २३:१७ * विभिन्न प्रमुख ग्रीक पाण्डुलिपिहरूमा यो पद पाइँदैन; तर बाइबलका केही अनुवादहरूमा भने यस पदमा यस्तो लेखिएको छ: “तिनले हरेक वर्ष चाडको बेला कुनै एक जना कैदीलाई तिनीहरूका निम्ति मुक्त गर्नै पर्थ्यो।” (मत्ती २७:१५; मर्कूस १५:६ तुलना गर्नुहोस्।)
^ लूका २३:२६ * अतिरिक्त लेख ६ हेर्नुहोस्।
^ लूका २३:३४ * मत्ती १६:३ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ लूका २३:४२ * शाब्दिक, “आफ्नो राज्यमा आउनु भएपछि।”
^ लूका २३:४५ * यो पर्दाले महापवित्रस्थान र पवित्रस्थानलाई छुट्टयाउँथ्यो।
^ लूका २३:४६ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।